Misy tahiry SingleCare ao amin'ny Bartell Drugs - Orinasa | Desambra 2021
Vaovao, Wellness News Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Pets Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Wellness Ny Fizahana Orinasa, The Checkout Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy Fanatanjahan-Tena Mavesatra Fialam-Boly Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Zava-Mahadomelina Vs. Namana Orinasa, Vaovao Fanabeazana Ara-Pahasalamana
Tena >> Orinasa >> Ny tahiry SingleCare dia misy ao amin'ny Bartell Drugs ankehitriny
Ny tahiry SingleCare dia misy ao amin'ny Bartell Drugs ankehitriny
Fantatry ny tompon-tany ao Washington: Rehefa te-hiantsena any an-toerana ianao noho ny zava-mahadomelina anao dia mankanesa any amin'ny Bartell Drugs. Nandritra ny 130 taona sy ny fanisam-bato, ity magazay any Seattle, fananana ao an-toerana ity, dia nanompo ireo vondrom-piarahamonina manerana ny Pasifika Avaratra Andrefana — ary ahitana vokatra mihoatra ny 3.000 avy amin'ireo orinasa kely hafa ao amin'ilay faritra.
Nanomboka izany rehetra izany rehefa nividy fivarotam-panafody kely iray tao amin'ny Distrikan'i Central Seattle i George H. Bartell Sr. Ny chain dia nitombo hatramin'ny 67 fivarotana sy toerana fivarotam-panafody. Ankehitriny, noho ny fiaraha-miasa vaovao miaraka amin'ny SingleCare, tsy vitan'ny hoe hahazo serivisy tsara indrindra ianao, fa ho azonao amin'ny vidiny tsara indrindra. Rehefa mameno ny Rx anao amin'ny Bartell Drugs ianao dia afaka manangona hatramin'ny 80% amin'ny fanafody.
Raha mbola tsy nampiasa a karatra fihenam-bidy , ireto ny fototra. Alohan'ny handehananao any amin'ny fivarotam-panafody dia araho fotsiny ireto dingana tsotra telo ireto.
Mikaroha fanafody singlecare.com .
Amboary ny sivana amin'ny fatrao sy ny habetsany.
Mitadiava ny tapakila Bartell Drugs.
Azonao atao ny mandefa hafatra, manonta na mandefa mailaka ny tapakila ho anao hampiasaina ao amin'ny fivarotam-panafody Bartell Drugs — na koa mampidina ny app SingleCare amin'ny App Store na amin'ny Google Play . Avy eo, asehoy amin'ny farmasia anao fotsiny rehefa maka ny resanao ianao. Tsy misy vidiny ny fampiasana azy, ny fitsitsiana fotsiny.
Hotehirizinao $ 5 fanampiny ny famenoana sahaza anao voalohany, ary avy eo hahazo 1 $ amin'ny Tahiry Bonus manoloana ny prescript amin'ny ho avy feno famenoana. Tsy misy trondro, fa ny vidiny ambany ihany!
Inona ny haavon'ny glucose amin'ny ra ara-dalàna?
Aleve vs Ibuprofen: fahasamihafana lehibe sy fitoviana
afaka mandray Advil sy tylenol amin'izany andro izany ve ianao?
haingana toy inona no ahafahanao mampihena lanja amin'ny topamax
inona no fanaintainan'ny vehivavy bevohoka
inona ny siram-dra tokony ho 2 ora aorian'ny fisakafoanana?
maharitra hafiriana vao manomboka miasa ny singulair
inona ny zyban ary ahoana ny fomba fiasa